महेश बस्नेतको प्रश्न : काँग्रेसले बहुदलीय व्यवस्था छोडेको हो ? - News 88 Post
काठमाठाैं । एमाले नेता महेश बस्नेतले नेपाली काँग्रेसले बहुदलीय व्यवस्था छोडेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रिय युवा संघको बैठकमा बोल्दै युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका बस्नेतले बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्दति छोडेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
‘म काँग्रेसका नेता र बुद्धिजीवीहरुलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु । के काँग्रेसले बहुदलीय व्यस्तता र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र पद्दति छोडेको हो ? नेकपा एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदहरुको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्पतिको कार्यालय र सर्वोच्चमा गइरहँदा म शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु’, बस्नेतको प्रश्न थियो । उनले बहुदलीय व्यवस्थाका निम्ती ७१ बर्षदेखि लडेको यहि दिन हेर्न हो भन्दै तपाईहरु अव निर्दलीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्नुभो भन्दै प्रश्न गरे ।
४ हजार ७६२ संक्रमित थपिँदा ६ हजार ४९१ निको भए
June 6, 2021 June 6, 2021 N88
आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसक्नेले देश सम्हाल्छु भनेर गफ नगरौं : गगन थापा
कांग्रेसमा सात युवा नेताको प्रस्ताव, वैकल्पिक विधिबाट ७७ जिल्लामै मतदान